Ny fampidinana ny fampandehanana fiara amin'ny lafiny lozisialy miaraka amin'ny rafitry ny fanafanana RF
Home / Applications / Induction Preheating / Fitaovana fanamafisam-peo fanamafisana mialoha ny induction
Sokajy: Induction Preheating Tags: induction automatique automotive, ny fampidinana entona fampidinana, induction preheating coating, fampidinana fametrahana induction, Preheating fusion, preheating rafitra lasitra
Fitaovana fanamafisam-peo fanamafisana induction miaraka amin'ny fitaovana fanamafisana induction
Tanjona hanafanana mialoha ny seam ny axe an'ny kamio mihoatra ny 300 ° F ao anatin'ny 15 segondra ho an'ny fampiharana welding ary hitazomana ny mari-pana ao anatin'ny faritra welding mandritra ny 15 segondra aorian'ny herinaratra
Fitaovam-pitaterana vy vy; 350 ° sy 400 ° F ny mari-pamantarana ny loko, 350 °, 375 ° ary 400 ° F ny mari-pana amin'ny "crayons"
Fitaovana fampitaovana herinaratra DW-HF-35kW, tobim-pahanginana lavitra miaraka amina capacitor efatra 1.2 μF ary coil fampidirana pancake natao manokana.
Ny dingana iray dia namboarina mba hanodinana ny axle 400 ° ao anatin'ny 15 segondra ary ny coil induction dia napetraka eo ambonin'ny axe. Ny manodidina ny famaky (eo ambanin'ny coil) dia nolokoina tamin'ny loko 350 ° sy 400 ° F manondro loko. Raha mbola mihodina ny famaky dia napetraka nandritra ny 15 segondra ny herin'ny RF. rehetra
ny loko dia miempo, manamafy fa ny mari-pamantarana ny axle dia mihoatra ny 400 ° F. Nakatona ny herin'ny RF ary napetraka avy hatrany teo amin'ny famaky ny mari-pana "crayon" hanaraha-maso ny mari-pana. Tsy nitsonika ny crayon 400 ° F; nitsonika nandritra ny 375 segondra ny crayon cray 15 ° F; nitsonika nandritra ny 350 ny crayon 30 ° F
Vokatra Ny hafanana vy dia nafana hatramin'ny 400 ° F tao anatin'ny 15 segondra ary ny mari-pana mihoatra ny 350 ° F dia voatazona mandritra ny 30 segondra aorian'ny famonoana herinaratra, mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fangatahana welding.